Kadib Hanjabaadii Cuslayd Ee Nasser Al-Khelaifi U Jeediyay Xidigaha Kooxdiisa, PSG Oo Ka Farxisay Barcelona & Real Madrid. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 17, 2019 at 06:54 Kadib Hanjabaadii Cuslayd Ee Nasser Al-Khelaifi U Jeediyay Xidigaha Kooxdiisa, PSG Oo Ka Farxisay Barcelona & Real Madrid.2019-06-17T06:54:58+01:00 CAYAARAHA
Madax waynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi ayaa balan ku qaaday in aanu u dul qaadan doonin dhaqamada xidigaha kooxdiisa wuxuuna cadeeyay in albaabku u furan yahay xidigii aan doonayn in uu shaqo adag kooxdiisa u qabto.
Nasser Al-Khelaifi ayaa cadeeyay in aanu wax intaas ka badan u dul qaadan doonin dabeecadaha iyo dhaqamada aan fiicnayn ee ay sameeyaan qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu magaca wayn kooxdiisa.
Laakiin iyada oo hadalka Nasser Al-Khelaifi uu markii horeba ka farxiyay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, haddana waxaa soo baxay war kale oo muujinaya in PSG ay diyaar u tahay in ay xagaagan iibiso Neymar Jr.
Wargayska caanka ah ee dalka France ka soo baxa ee L’Équipe ayaa shaaciyay in kooxda PSG ay hadda u furan tahay in ay Neymar Jr iibiso xagaagan haddii ay dalab qaali ah u helaan.
Warka uu L’Équipe shaaciyay ayaa soo baxay saacado kooban kadib markii uu Nasser Al-Khelaifi furka ku tuuray xidigaha kooxdiisa ugu magaca wayn ee uu cadeeyay in ayna halkan u sii joogi karin maad balse shaqo adag looga baahan yahay.
PSG ayaa ka cadhaysan in Neymar Jr uu sumcadiisii iyo sumcadii kooxdiisa PSG uu sharafta ka qaaday kadib dhacdooyinkii garoonka ka baxsanaa ee uu ganaaxyada ku mutaystay iyo waliba sida aanu kooxda u ixtiraamayn.
PSG ayaa sidoo kale la socota kiiska kufsiga ah ee Neymar Jr loo haysto iyaga oo markii horeba la dhibtoonayay dhaqanada xun ee uu samaynayay waxayna wararku sheegayaan in dhawrkii todobaad ee la soo dhaafay uu Pini Zahavi ka shaqaynayay in uu Neymar ku laabto Spain.
Wargayska L’Équipe ayaa sheegay in wada xaajoodyo u socdaan kooxaha Barcelona iyo PSG ee suurtogalnimada uu Neymar jr ugu laaban karo Camp Nou inkasta oo laba sano ka hor uu kaga soo baxay €222 milyan yuro.
Kooxda Real Madrid oo iyadana Neymar Jr lala xidhiidhinayay ayaa la filayaa in ay markeeda isku dayi doonto in ay Barcelona kula tartanto xidiga reer Brazil inkasta oo Madrid ay aad u xiisaynayso Kylian Mbappe.
Si kastaba ha ahaatee, PSG ayaa si lama filaan ah albaabka ugu furtay Neymar Jr oo la sheegay in markii uu xulkiisa ku biirayay uu maamulka PSG ku wargaliyay in aanu Paris ku soo laabanayn isaga oo doonaya in uu Barcelona ku soo laabto.
« MAQAAL: MUXUU YAHAY KAARKA DHIMMAN?
Guddoomiyaha degmada Buurtinle oo xilka laga qaadayo »